China Ukuhlobisa udonga lokuhlobisa okhiye abakhiqizi nabaphakeli | UShengrui
Idizayini yoqobo "IKHAYA ELIMNANDI LASEKHAYA" ukwakheka kodonga.Isitayela nenhle. Ukukhetha okuhle ekhaya.
Idizayini: Idizayini yoqobo "IKHAYA ELIMNANDI LAMAKHAYA" idizayini yehhuku yokwakha.Yinhle futhi yinhle. Ukukhetha okuhle ekhaya.
Ihhukhi yokhiye elula futhi esebenzayo: Idizayini ebushelelezi, emnyama, lezi ziphathi zendlu nezemoto zingafakwa noma yikuphi lapho ufuna ukugcina okhiye bakho bahleleke kakhudlwana. Lokhu okuhle“IKHAYA ELITHANDEKAYO” okhiye bokufaka banezingwegwe eziyishumi ezilengisiwe ezisetshenziselwa ukugcina okhiye, amahedfoni, noma izinto ezincane zomuntu siqu.
Isitoreji esihlakaniphile: Gcina amagumbi odaka nezindawo zokungena kucocekile futhi kucocekile ngalesi siteshi sokhiye. Ilungele ukuphatha okhiye, izinhlamvu zezilwane, izigqoko, izambulela, izesekeli nokuningi. Isitayela sanamuhla salo mhleli sizosiza ekhaya lakho futhi senze ikhaya lakho libe mnandi.
Ukufaka i-Hardware kufakiwe: Isiphathi ngasinye sokhiye sezindonga, amakhishi, noma ukungena kwangaphakathi nakho kuza nezikulufo kanye nama-plugs ukukwenza kusheshe futhi kube lula.
Ikhwalithi: Yenziwe ngempahla yensimbi esindayo inikela ngesitayela esihlala isikhathi eside, ukusebenza nokuqina. Iqine kakhulu, iqinile, futhi inemininingwane ephelele. 100% ukuhlolwa kwekhwalithi ngaphambi kokuthunyelwa.
Isipho esihlakaniphile sokufudumeza indlu: Kuhle kwabasanda kushada, imibhangqwana emisha, abangane nomndeni, lokhu kwenza isipho esihle kunoma ngubani onemindeni emikhulu noma izimoto eziningi.
Usayizi uyatholakala: 11.8 ”L, noma ngezifiso.
Qeda: powder okuhlala camera ngombala omnyama nomhlophe.
Isetshenziswa Kabanzi: Bamba okhiye, amajazi, izikhwama njll Akuyona nje idizayini yehhuku, futhi nomhlobiso wodonga.
Langaphambilini Islamic odongeni art
Olandelayo: Umnikazi wekhandlela we-DEER Metal Candle